श्रीमानको अगाडि श्रीमतीले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी २० कुरा नत्र…. – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमानको अगाडि श्रीमतीले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी २० कुरा नत्र….
विश्वका अधिकांश देशमा पुरुष मानसिकता नै हाबी देखिन्छ । दम्पत्ती बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउदा दुवैले धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अनेक उपाय अपनाइन्छन् । त्यसमा पनि श्रीमतीले अझ बढी सम्झौता गर्नुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
श्रीमानसँग ठूलो आवाजमा कहिल्यै नबोल्नु । श्रीमानको कमजोरी परिवार र साथीको अगाडि नखोल्नु । सेक्स प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै नगर्नु । समुहमा रहँदा श्रीमानलाई पहिला जवाफ दिने मौका दिनु । बच्चाको अगाडि कहिल्यै श्रीमानलाई गाली नगर्नु । आफ्नो मायालाई पैसासँग तुलना नगर्नु । श्रीमानको अगाडि आफु धेरै व्यस्त नहुनु ।
उसलाई समय दिनु । श्रीमान र आफ्नो कामको तुलना नगर्नु । आफ्नो पूर्व प्रेमीसँग कहिल्यै तुलना नगर्नु । आफ्नो मुड अनुसार कहिल्यै कुरा नगर्नु । अरु पुरुषसँग कहिल्यै तुलना नगर्नु । श्रीमानको साथीको बारेमा कहिल्यै नराम्रो नबोल्नु । उसले तिमीसँग विहे गरेको भन्ने कुरा कहिल्यै नबिर्सनु । कहिल्यै पनि अरुलाई तिम्रो श्रीमानको ख्यान गर्नु नभन्नु ।
कुनैदिन श्रीमान खाली हात घर आए, उसलाई गाली नगर्नु । श्रीमानको पसिना ख्याल गर्नु । घरबाट बाहिर निस्कनु अघि श्रीमानको कपडा ख्याल गर्नु । आफ्नो साथीलाई श्रीमानको धेरै नजिक हुने मौका नदिनु । शौचालय गएको र लुगा लगाउने बेलामा धेरै हतार नगर्नु। श्रीमानले चाहेको समयमा यौन सम्बन्ध राख्न तयार बन । किनभने पुरुषको लागि यो निकै महत्वपूर्ण छ । लामो समयसम्म यौन सम्पर्क नराख्दा उसलाई तनाव हुन्छ ।
प्रकाश सुवेदीले ‘दारा निस्केको महानायिका’ भनेपछि पुजाको आ’क्रोश [भिडियो सहित]